What is multiparity? And Possible Complications? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကိုယျဝနျဆောငျသားဖှားခွငျးဆိုတာ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ သဘာဝဖွဈစဉျတဈခုပါ။ နစေ့ဉျနတေို့ငျးမှာ အမြိုးသမီးထောငျပေါငျးမြားစှာ သားဖှားနကွေတယျလို့ စဈတမျးတှကေ ပွောပါတယျ။ အဲဒီအမြိုးသမီးတိုငျးဟာ ပထမဆုံးကိုယျဝနျဆောငျတာမဟုတျပါဘူး။ အခြို့က ဒုတိယကိုယျဝနျ၊ အခြို့က တတိယ၊ စတုတ်ထနဲ့ အဲဒီထကျပိုတဲ့ကိုယျဝနျအကွိမျရတှေအေမြိုးမြိုးဖွဈနိုငျပါတယျ။
အမြိုးသမီးတဈဦးဟာ နှဈဦး သို့မဟုတျ နှဈဦးထကျပိုတဲ့ (Viable Pregnancy)ကိုယျဝနျဆောငျရငျ Multipara လို့ချေါပါတယျ။ ကိုယျဝနျဟာ သကျတမျးအနနေဲ့ အနညျးဆုံး နှဈဆယျရကျသတ်တပတျရှိမှ Viable Pregnancy လို့ချေါပါတယျ။ Primiprara ဆိုတာကတော့ ကိုယျဝနျတဈကွိမျသာဆောငျခွငျးကို ချေါပါတယျ။
Grand Multipara ဆိုတာကတော့ ငါးကွိမျနဲ့အထကျ ကိုယျဝနျဆောငျခွငျးဖွဈပါတယျ။ Great-Grand Multipara ကတော့ ဆယျကွိမျနဲ့အထကျ ကိုယျဝနျဆောငျခွငျးဖွဈပါတယျ။ Great-Grand Multipara ဖွဈရငျ မိခငျရော ကလေးအတှကျပါ ဆိုးကြိုးမြားနိုငျပါတယျ။
Multiparity ဖွဈရငျ ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခါ ဘယျလိုဆိုးကြိုးတှေ ဖွဈနိုငျသလဲ?
-ရမွှောရတှေဟော မိခငျရဲ့သှေးစီးကွောငျးထဲဝငျပွီး reaction တှဖွေဈတဲ့အခွအေနတေဈခုဖွဈစပေါတယျ။ Amniotic Fluid Embolism လို့ချေါပွီး နှလုံး၊ အဆုတျကိုထိခိုကျစပေါတယျ။
-Levator Ani ဟုချေါသော တငျပဆုံတဈဘကျတဈခကျြရှိကွှကျသား ကောငျးကောငျး အလုပျမလုပျနိုငျတော့ခွငျး စတဲ့ဆိုးကြိုးတှဖွေဈစနေိုငျပါတယျ။
Multiparity အမြိုးသမီးတှေ ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခါ….
-သံဓာတျနဲ့ ဖောလဈ (Folic acid) ဂရုတဈစိုကျ ကွိုတငျသောကျသငျ့ပါတယျ။
-မီးဖှားဖို့ဆေးရုံတကျနရေတဲ့အခြိနျမှာ ကနျြရှိနတေဲ့ သားသမီးတှအေတှကျလညျး အားလုံးကွိုတငျစီစဉျပေးဖို့လိုပါတယျ။
-သားဖှားမီးယပျဆရာဝနျဆီမှာ ကိုယျဝနျအပျပွီး ပုံမှနျ Antenatal Care ယူဖို့လိုအပျပါတယျ။
-မှေးဖှားပွီးသှေးဆငျးတာကို ကုသဖို့ ကွိုတငျပွငျဆငျထားရပါမယျ။ (Risk of Post partum hemorrhage)
-ကလေးမီးဖှားပွီးတဲ့အခါမှာ ဆီးနဲ့မီးယပျပွဿနာတှမေဖွဈဖို့ Physiotherapy ပွုလုပျရပါမယျ။ Follow-up မှနျမှနျသှားရပါမယျ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သားဖွားခြင်းဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ အမျိုးသမီးထောင်ပေါင်းများစွာ သားဖွားနေကြတယ်လို့ စစ်တမ်းတွေက ပြောပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ပထမဆုံးကိုယ်ဝန်ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့က ဒုတိယကိုယ်ဝန်၊ အချို့က တတိယ၊ စတုတ္ထနဲ့ အဲဒီထက်ပိုတဲ့ကိုယ်ဝန်အကြိမ်ရေတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ နှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ (Viable Pregnancy)ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် Multipara လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဟာ သက်တမ်းအနေနဲ့ အနည်းဆုံး နှစ်ဆယ်ရက်သတ္တပတ်ရှိမှ Viable Pregnancy လို့ခေါ်ပါတယ်။ Primiprara ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ဝန်တစ်ကြိမ်သာဆောင်ခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။
Grand Multipara ဆိုတာကတော့ ငါးကြိမ်နဲ့အထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Great-Grand Multipara ကတော့ ဆယ်ကြိမ်နဲ့အထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Great-Grand Multipara ဖြစ်ရင် မိခင်ရော ကလေးအတွက်ပါ ဆိုးကျိုးများနိုင်ပါတယ်။
Multiparity ဖြစ်ရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ?
-ရေမြွာရေတွေဟာ မိခင်ရဲ့သွေးစီးကြောင်းထဲဝင်ပြီး reaction တွေဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။ Amniotic Fluid Embolism လို့ခေါ်ပြီး နှလုံး၊ အဆုတ်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်။
-Levator Ani ဟုခေါ်သော တင်ပဆုံတစ်ဘက်တစ်ချက်ရှိကြွက်သား ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း စတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Multiparity အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ….
-သံဓာတ်နဲ့ ဖောလစ် (Folic acid) ဂရုတစ်စိုက် ကြိုတင်သောက်သင့်ပါတယ်။
-မီးဖွားဖို့ဆေးရုံတက်နေရတဲ့အချိန်မှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ သားသမီးတွေအတွက်လည်း အားလုံးကြိုတင်စီစဉ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
-သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်ဆီမှာ ကိုယ်ဝန်အပ်ပြီး ပုံမှန် Antenatal Care ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
-မွေးဖွားပြီးသွေးဆင်းတာကို ကုသဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ (Risk of Post partum hemorrhage)
-ကလေးမီးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာ ဆီးနဲ့မီးယပ်ပြဿနာတွေမဖြစ်ဖို့ Physiotherapy ပြုလုပ်ရပါမယ်။ Follow-up မှန်မှန်သွားရပါမယ်။